Ukubuka kwamahhala kwe-YouTube | Ukuthandwa kwamahhala kwe-YouTube | Amazwana e-YouTube amahhala
Ukubuka kwamahhala kwe-YouTube | Ukuthandwa kwamahhala kwe-YouTube
Ababhalisile be-YouTube bamahhala | Amazwana e-YouTube amahhala
#1 Inkundla yokuxhumana ye-YouTube ukuze uthole ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube, okuthandwayo, amazwana nababhalisile kubantu bangempela!
Isebenza kanjani? Zuza izinhlamvu zemali ngokuxhumana neziteshi zamanye amalungu. Bese, ngenisa amavidiyo akho ku-GoViral, khetha izinsiza ofuna ukuzithola futhi phakathi nemizuzu, uzoqala ukuthola ukubukwa, ukuthanda ukuphawula & ababhalisile abavela kubantu bangempela, mahhala!
Thola Ukukhula Kwe-YouTube Kwamahhala Manje! or Thenga ababhalisile be-YouTube
Izinzuzo Zokusebenzisa i-GoViral Daily
Ikhululekile Ngempela Ukuyisebenzisa!
Izwa insizakalo yekhwalithi ye-premium mahhala ngezinketho ongazithuthukisela inkokhelo.
Ikunikeza Ukubukwa kwamahhala, ukuthandwa, ababhalisile namazwana
Inethiwekhi yethu ikuvumela ukuthi uthole ngokushesha futhi kalula ababhalisile bamahhala, ukubukwa, ukuthandwa namazwana. Konke okudingayo!
Ukukhula okuzenzakalelayo kwe-YouTube
Faka amavidiyo akho kunethiwekhi yethu bese ufaka inani lenkonzo ngayinye ofuna ukuyithola. Ngemuva kwalokho, hamba uyekele inethiwekhi yethu ikulethele konke ngokuzenzekelayo.
Kuthuthukisa Ukukhula Okuphilayo
Ukuthola ababhalisile, ukubukwa, ukuthandwa namazwana kusiza ukukhuphula amazinga akho osesho, okusiza ukukhulisa ukukhula kwakho nokuzibandakanya.
Gxila kokuqukethwe kwakho nogqozi ngenkathi inethiwekhi yethu iletha ukuzibandakanya esiteshini sakho nakumavidiyo.
I-interface yethu iyasebenziseka futhi iyachaza. Ngena ngemvume, ngenisa amavidiyo akho, khetha inani lababhalisile, ukubukwa, ukuthandwa namazwana ozowathola futhi usuqedile!
Thola Izinhlamvu zemali
Thola izinhlamvu zemali ngokubuka amavidiyo nokuzibandakanya nawo.
Chitha Izinhlamvu Zakho Zemali
Chitha izinhlamvu zakho zemali ukuthola ukubuka kwamahhala, ukuthandwa, ababhalisile namazwana.
Hlala emuva ngenkathi uthola ababhalisile, ukubukwa, ukuthandwa namazwana!
Ingisiza ukuthuthukisa isiteshi sami…
Lokhu bekungukuthuthuka esikudingayo ukuze sikhombise ikhasi lethu ngokushesha!
YINKONZO enhle kangaka!
Ngiyabonga kakhulu bafana ngenkonzo enhle kangaka! I-GoViral yi-APP ENGCONO KAKHULU!
Ubukuphi kulo nyaka odlule?
Thola Ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube futhi uzuze ukubuyiswa kwamabhizinisi abalulekile ngokukhangisa nge-YouTube
Ngabe ubheke ukukhulisa ibhizinisi lakho futhi ukwandise inzuzo yebhizinisi lakho? Kufanele usebenzise ukumaketha kwevidiyo. Alikho isu lesimanje lokumaketha ibhizinisi eliqediwe namuhla ngaphandle kohlelo lokumakethwa kwevidiyo. Ngemuva kwakho konke, uma kukhulunywa ngokukhangisa kokuqukethwe, amavidiyo abhalisa ama-ROI aphezulu kakhulu. Akunandaba ukuthi yiziphi izinhloso zakho ezithile ngemuva kokubandakanya ukumaketha kwevidiyo, ukuzivocavoca nakanjani kuzokuletha.
Ukumakethwa kwevidiyo kwaziwa kahle emibuthanweni yezokumaketha ngokwazi kwayo kokubili ukuqhuba ukuzibandakanya kwamakhasimende nokukhiqiza ukuhola kwebhizinisi lakho. Uma ungakakufaki ukumakethwa kwevidiyo kuhlelo lwakho lokumaketha okuqukethwe, sekuyisikhathi sokuthi ukwenze lokho. Ukumakethwa kwevidiyo kuzokhuphula ukuphakama okuphezulu esikhathini esizayo esiseduze futhi kunikeze izinzuzo eziningi zokumaketha zebhizinisi lakho.
Kungani ukhetha i-YouTube yokusingathwa kokuqukethwe kwamavidiyo webhizinisi lakho
Asikwazi ukukhuluma ngamavidiyo aku-inthanethi futhi singasho i-YouTube. Iwebhusayithi yokubamba nokwabelana ngamavidiyo ifana nokuqukethwe kwamavidiyo aku-inthanethi. Eqinisweni, abantu abaningi abazi, kepha i-YouTube iyinjini yokusesha edume kakhulu emhlabeni. Ngamanye amagama, unezithameli ezilungele kuwebhusayithi, futhi ukulayisha okuqukethwe kwamavidiyo wokumaketha ku-YouTube kukusiza ukuthi ukhuphuke uphakeme ngokuya nge-SEO. Ukuthola ukubukwa kwe-YouTube esiteshini sakho sebhizinisi le-YouTube kungakusiza ekubonakaleni komkhiqizo wakho futhi kuthuthukise ukufinyelela kwawo. Ngakho-ke, kungani ungafuna ukukhetha noma iyiphi enye iwebhusayithi yokubamba ividiyo ukuze ulayishe okuqukethwe kwakho kwamavidiyo wokumaketha?
Izinzuzo ezilinganisekayo ezenziwa ngedatha zokumaketha kwe-YouTube
Kulesi sigaba, sibheka ngokuningiliziwe zonke izinzuzo ozitholayo lapho ukhetha i-YouTube njengengxenyekazi oyithandayo yokwabelana ngamavidiyo wokumaketha ibhizinisi lakho:
Ukuvezwa okungakholeki - I-YouTube iyinkosi yawo wonke amasevisi wewebhu abelana ngamavidiyo. Abasebenzisi abaneminyaka yobudala engu-15-55 bangena kupulatifomu njalo. Kuphephile ukusho ukuthi ividiyo ingakusiza ukuthi uqaphele. Kodwa-ke, kukhona ithoni yokuqukethwe kwamavidiyo kuwebhusayithi, futhi udinga ukwazi ukwenza amavidiyo alungiselelwe ngekhwalithi ukuze uqiniseke ukuthi awalahleki olwandle wawo wonke amavidiyo amaningi abanjwe lapho. Ukuthola ukubukwa kokuqukethwe kwevidiyo yakho kungabonakala kungumsebenzi onzima. Ngalesi sizathu, uma ungathola indlela yokuthola khulula ukubukwa kwe-YouTube yesiteshi sakho se-YouTube sebhizinisi, kufanele usithathe kalula.
Ithrafikhi ephezulu - I-YouTube ibhalisa ithrafikhi ephezulu yomsebenzisi usuku lonke. Inani labasebenzisi bayo abasebenzisa izigidigidi babuka ngaphezulu kwamahora ayisigidi samavidiyo kumakethi wokusingathwa kwewebhu. Insizakalo yokubamba ividiyo mahhala iyakwazi ukufinyelela kubabukeli abaningi kunethelevishini yekhebula. Inikeza amabhizinisi isu lokusabalalisa eliphansi ngamavidiyo wokukhangisa awakhiqizayo. Uma kusetshenziswe kahle, nawe ungalinganisa izigidigidi zokubukwa kokuqukethwe kwamavidiyo wakho wokumaketha, uqinisekise ukusakazwa kwebhizinisi elingenayo lomkhiqizo wakho.
Okungenzeka ku-virality - I-YouTube inikeza amabhizinisi amathuba amaningi okwenza okuqukethwe kwamavidiyo awo kusabalale. Ungafaka okuqukethwe kwevidiyo yakho kokunye ukuxhumana kwezokumaketha okuningana, njengokukuhlanganisa kokuthunyelwe kwebhulogi lakho noma wabelane ngesixhumanisi salo kwiforamu yezingxoxo ze-LinkedIn.
I-SEO ethuthukisiwe - Kusukela iGoogle ithole i-YouTube, injini yokusesha ibeka amawebhusayithi ngokuqukethwe kwamavidiyo we-YouTube ngaphezulu ezinjinini zayo zokucinga Ngamanye amagama, akukhona nje ukuthi ukwakha amasu akho wokuqukethwe kwevidiyo ku-YouTube kukusiza ukuthi uzuze imibono ezuzisa ukumaketha kwakho kwe-YouTube, kodwa futhi kuzuzisa yonke imizamo yakho yokumaketha yedijithali. Lapho isikhundla se-SEO sewebhusayithi yakho yebhizinisi sithuthukiswa, ikhasi lakho lewebhu lomkhiqizo libhalisa ngokuzenzakalela ukubukwa kwamakhasi aphezulu.
Ukuhlanganiswa okulula nokumaketha kwezokuxhumana - Akukho okusebenza ngempumelelo ekukhangiseni kwemidiya yezenhlalo kunokuqukethwe okungabiwa ngamavidiyo. Lapho udalela ividiyo yakho enamanani aphezulu wokukhangisa ngebhizinisi lakho ku-YouTube, ukujabulela ukuguquguquka kokuyaba emakhasini wakho wezokuxhumana. Abantu abaningi kungenzeka babuke amavidiyo kuzinkundla zokuxhumana ezivela ezondliweni zabo zezindaba kunokufuna isiteshi sakho sebhizinisi. Uma bethola ukuthi okuqukethwe yividiyo yakho kuyathandeka ezinkundleni zokuxhumana, bazoyabelana kalula nabangane babo nabantu abajwayelene nabo ngokusebenzisa izibambo zabo zokuxhumana. I-YouTube-ke ikuvumela ukuthi uhlanganise izinzuzo zokumakethwa kwamavidiyo nokukhangiswa kwemithombo yezokuxhumana ube isu elilodwa lokukhangisa elinemiphumela ephezulu.
Ukufinyelela kwamanye amazwe - I-YouTube ithokozela ukuthandwa emhlabeni wonke. Iyasebenza emazweni angama-88 futhi inikezwa ngezilimi ezahlukahlukene ezingama-76. Ayikho enye insizakalo yokusingathwa kwamavidiyo wewebhu enwebisa amavidiyo akho wokumaketha ibhizinisi ukufinyelela komhlaba wonke i-YouTube engakufinyelela. Uma uthola ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube futhi ukhulisa ngempumelelo ukubalwa kokubukwa kwamavidiyo wakho wokumaketha ku-YouTube, uwunikeza isijeziso senhlalo. Izethameli ziyayamukela kakhulu ividiyo enokubukwa okuphezulu kunaleyo eyenzeka kuvidiyo ebonakala ngathi ibukwe ngabantu abambalwa ngaphambi kwabo.
Ungaqala kanjani ngokumaketha kwe-YouTube
Manje njengoba usukulungele ukungena ku-YouTube Marketing, sicabange ukuthi ungasebenzisa umhlahlandlela wokuthi ungaqala kanjani. Ukumaketha kwe-YouTube kungabonakala kubucayi kubaqalayo abangasebenzisi insizakalo yokubamba ividiyo nokwabelana njengethuluzi lokumaketha. Ukumaketha kwe-YouTube okusebenzayo kufaka imisebenzi embalwa edinga ukunakekelwa nokunakekelwa okufanele. Udinga ukwazi ukuthi ungasakha kanjani isiteshi se-YouTube semiphumela emihle futhi ulungiselele namavidiyo owakha ku-YouTube ukuthi abe sezingeni eliphezulu ezinjinini zokusesha ku-inthanethi. Udinga futhi ukuqonda ukuthi ungayiphatha kanjani futhi uyisebenzise kanjani imikhankaso yokukhangisa ye-YouTube, futhi uhlaziye amamethrikhi enziwe atholakalela izibalo zevidiyo ze-YouTube.
Ngezansi, sabelana ngezinkomba zokuthi ungaluqala kanjani ngempumelelo uhambo lwakho lokumaketha amavidiyo we-YouTube ukuze uzuze ibhizinisi lomkhiqizo wakho.
Ukwakha nokusebenza kwesiteshi se-YouTube sebhizinisi
Uma ufisa ukuthola imihlomulo ephelele ngokukhangisa kwebhizinisi lakho le-YouTube, khetha i-Akhawunti Yomkhiqizo ku-Google ukuze ubhalisele i-YouTube kunokusebenzisa i-akhawunti yakho. I-Akhawunti Yomkhiqizo izonika amandla abantu abaningi ukuthi bangene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-YouTube yomkhiqizo, hhayi kuphela umuntu oyidalile. Uma usebenzisa i-akhawunti yakho yakwa-Google, igama lomsebenzisi we-akhawunti yakho yakwa-YouTube kuzoba yilelo osuzicacisele lona ku-Google. Ukwakha nokuphatha iziteshi ze-YouTube eziningi ngasikhathi sinye kuba yinto engenamthungo nge-Akhawunti Yomkhiqizo, ozozuza kuyo lapho ibhizinisi lakho likhula.
Ukwenziwa kokuqukethwe okuphumelelayo cishe akunakwenzeka ngaphandle kocwaningo olwanele. Uma ufuna ukuthi amavidiyo wakho we-YouTube enze kahle, funda okuncane mayelana nenani labantu ababukele i-YouTube. Yisiphi isiko iningi lazo elivela kuso, yiluphi uhla lweminyaka yabo, futhi bakhetha ukukusebenzisa kanjani okuqukethwe kwakho? Ukuzijwayeza ngalolu lwazi kuzokusiza ukuthi ukhiqize okuqukethwe kokukhangisa kwamavidiyo we-YouTube okuhlose ukuguqula okuphezulu. Uma usuvele ushicilele okuqukethwe kwevidiyo esiteshini somkhiqizo wakho se-YT, ungasebenzisa ithebhu ye-Analytics yewebhusayithi ukuze ufunde ngezinhlobo zabantu nokuziphatha kwakho. Funa ukugqagqana kokuma kwezithameli nabalandeli bakho kwamanye amakhasi ezokuxhumana. Kufanele ikusize ngendalo yakho yonke yokuqukethwe kokumaketha.
Qhathanisa futhi uhlole ukusebenza komkhiqizo wakho ku-YouTube nokwenziwa izimbangi zakho. Bheka ukubukwa kumavidiyo abo kanye nenani lababhalisile eziteshini zabo. Ngemuva kwalokho ungabeka amabenchmark wokusebenza kwamavidiyo wakho wokumaketha we-YouTube ngokufanele. Ungahle uthande ukuqaphela amagama asemqoka abawasebenzisile nezincazelo zokuqukethwe abakunikeze ugqozi lokwakha amavidiyo akho. Lokho kusho, ngaso sonke isikhathi yiba ngowokuqala endleleni yakho. Ukugcina ithebhu kumavidiyo athrendayo ku-YouTube nakho kuwumkhuba omuhle, ozokusiza ukhothoze amathiphu namasu okwenza okuqukethwe kwamavidiyo enza kahle kakhulu.
Ukulungiselela okuqukethwe kwamavidiyo we-YouTube ngemiphumela emihle
I-YouTube yinjini yokusesha yevidiyo ebeka okuqukethwe kwayo ngokususelwa kumagama angukhiye, izihloko, izincazelo, njalonjalo, ngokufana nanoma iyiphi enye injini yokusesha. Uma ufisa ukuthi okuqukethwe kwakho kwevidiyo ye-YouTube kutholakale kalula futhi uthole ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube ngokuzenzakalela, uzofuna ukwandisa amavidiyo owadalela insizakalo yokubamba. I-algorithm yezincomo ze-YouTube iphakamisa amavidiyo kuzethameli ngokususelwe kokuthandayo. Ungabhala isibalo sokubukwa okuphezulu kwamavidiyo owakhayo ngokwenza ucwaningo lwamagama asemqoka ku-YT nokwenza okuqukethwe kwamavidiyo okuhlobene kwamagama angukhiye enza kahle kakhulu. Ukuphela kokufanele ukwenze -
Woza nesihloko esinamandla ngamagama angukhiye afanele azokwamukelwa kalula yi-algorithm ye-YouTube. Zama ukungabi ugaxekile noma ulandele ukubhala kwesitayela sokuchofoza; nakanjani kuzoholela ku-SEO empofu yevidiyo yakho ye-YouTube.
Enza ngendlela oyifisayo isithonjana sevidiyo yakho. Isithonjana sevidiyo yakho siphakathi kwezinto zokuqala izilaleli ezizibonayo ngevidiyo yakho ye-YouTube. Isithonjana esikhangayo esidonsa amehlo sizokhuthaza abantu ukuthi bachofoze futhi badlale okuqukethwe kwakho kwevidiyo ye-YouTube. Yenza lesi sithonjana njengokulungiswa okuphezulu ngangokunokwenzeka ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu.
Bhala incazelo ecacile necacile yevidiyo. Abantu banamathuba amaningi okuthi badlale ividiyo futhi baqhubeke bayibuke kuze kube sekugcineni uma bengathola ukuthi isihloko sevidiyo sinentshisekelo kubo. Incazelo yevidiyo ecebile ngegama elingukhiye izokwenza ividiyo yakho ihehe kakhulu izibukeli futhi isize ukuyigcina ngesikhathi sokusebenza.
Faka ama-CTA ngendlela yamakhadi, ama-watermark, nezikhangiso ezinkulu. Ufuna ukuthi ababukeli bevidiyo yakho ye-YouTube yokuphromotha bathathe isinyathelo esivuna ibhizinisi lakho. Ukufaka lezi zinto ngokungenangqondo kokuqukethwe kwamavidiyo wakho wokumaketha we-YouTube kunganikeza izethameli zevidiyo yakho ingcindezi eziyidingayo ukuze zingene kumngcele wakho wokuthengisa webhizinisi.
Khuthaza izithameli zakho ze-YouTube ukuthi zithande, zabelane, futhi zibhalise amavidiyo akho. Kushayela ukuzibandakanya futhi kuthonya isikhundla sakho ku-algorithm ye-YouTube ngokufanele.
Isu elisebenzayo nelisebenza kahle kakhulu lokumaketha okuqukethwe kwe-YouTube ilelo elihlala lizihlola futhi lizivuselele ukuze lihambisane nezidingo nezifiso zababukeli. Ibuye ihambisane nezindlela zakamuva zemakethe. Lapho wenza isiteshi se-YouTube sebhizinisi lakho, uyokwenza kahle ukudweba bese ulandela uhlelo lokushicilela ividiyo ukuhlela imizamo yakho yokumaketha ividiyo.
Ungase futhi ufune ukugqamisa okuqukethwe kwakho ngokuqhubeka ngokungeza amagama-ncazo kubo, ukuhlele kube uhlu lwadlalwayo, nokwenza i-trailer yesiteshi sakho se-YouTube. Ungahlukanisa iphothifoliyo yakho yokuqukethwe kwevidiyo ku-YouTube ngokwakha izinhlobo ezahlukahlukene zamavidiyo ukumaketha umkhiqizo wakho. Isibonelo, ungalayisha ibhulogi yevidiyo ye-Customer Experience kuwo wonke amavidiyo achazayo owakhela isiteshi sakho.
Ukumaketha kwabathonya njengamanje kubhalisa impumelelo ephezulu. Ungahlanganisa ubudlelwano nama-YouTubers adumile ukuze wenze isiteshi sevidiyo ye-YouTube somkhiqizo wakho noma ube nabathonya ababonakalayo ababelana ngamavidiyo akho kweminye imithombo yezokuxhumana. Icebo lokusebenzisa isiteshi esithandwa kakhulu se-YouTube ukuhlola ukusebenza kokuqukethwe kwevidiyo yakho ye-YouTube ngezikhathi ezithile bese wenza izinguquko njengoba ufisa ukukubuyekeza ngezikhathi. Amathuluzi amaningi, afana ne-Canva ne-Channelview, ayatholakala ku-inthanethi, angasiza futhi athuthukise imizamo yakho yokumaketha. Uma ufisa ukukhulisa ukumaketha kwevidiyo yakho ku-YT, ungacabanga nokuyisebenzisa nabo.
Ukufingqa, ukumaketha kwe-YouTube kubukeka kungacabangi lapho uhlose ukungena ezweni lokukhangisa ngevidiyo. Ngenkathi kunezinsizakalo eziningi zokubamba nokwabelana ngamavidiyo ezinikezwa mahhala ku-inthanethi njengeVimeo neDailyMotion, akekho noyedwa ongaphikisana nokufinyelela nokusetshenziswa okuhlinzekwa yi-YouTube. I-YouTube inikela ngewebhusayithi edume umhlaba wonke yokusingathwa kwamavidiyo nokwabelana nge-interface elula, engenankinga futhi abaqalayo abangayisebenzisa ukulayisha okuqukethwe kwabo kwevidiyo. Namuhla, i-YouTube futhi ingenye yamawebhusayithi asetshenziswa kakhulu kuyo yonke imidiya yedijithali. Uzokwenza kahle ngokusebenzisa amandla ayo ukufinyelela izithameli ezibanzi zomkhiqizo wakho.
Sichaze ngenhla kwazo zonke izinyathelo ongazilandela ukwenza isu lokukhiqiza le-YouTube elikhiqizayo lebhizinisi lakho. Uma ucabanga ukuthi ungazuza ngosizo olwengeziwe ekusunguleni isiteshi sebhizinisi se-YouTube esiphumelelayo, uze endaweni efanele. Thola ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube futhi uthuthukise ukumaketha kwevidiyo yebhizinisi lakho ngendlela engcono kakhulu. Uma ufuna izithameli zakho zibheke phambili kokuqukethwe okukhiqizwa isiteshi se-YouTube somkhiqizo wakho, ungathembela kulwazi nobungoti bethu ukusiza. Khulisa izithameli zakho ze-YouTube kanye namakhasimende akho ebhizinisi ngomoya ofanayo!
Simply ubhalise, khona-ke login futhi uvakashele isigaba esithi "Thola Izinhlamvu zemali" ukuqala ukubuka amavidiyo. Ividiyo ngayinye oyibukayo, oyithandayo, oyiphawulayo futhi obhalise kuyo izokuzuzela izinhlamvu zemali.
Uma usunezinhlamvu zemali ongazisebenzisa, ngenisa amavidiyo akho esigabeni esithi "Amavidiyo Ami" bese ukhetha inani lababhalisile, ukubukwa, ukuthandwa namazwana ofuna ukuwathola kuvidiyo ngayinye.
Qhubeka uzuze izinhlamvu zemali mahhala ukuze u-ode amasevisi amaningi kumavidiyo akho, noma uvakashele ku- "Thenga Izinhlamvu zemali" ukuze uzithenge esikhundleni salokho.
Yebo, siyakwenza! Kalula login futhi uvakashele okuthi "Mema futhi uzuze okuningi" ukuthola i-URL yakho yokudlulisa eyingqayizivele.
Uma ufuna ukuthi ama-oda wakho alethwe ngokushesha, kufanele login futhi uvakashele ikhasi "lobulungu", lapho ungathuthukisela ezinhlelweni zeGolide noma zePlatinamu ngemali bese uthola "Ukuthengiselana Okubaluleke Kakhulu".
I-9th Meyi 2022
Ungasikhetha kanjani isizinda somculo esiphelele sevidiyo yakho ye-YouTube?
Uma abantu becabanga ngamavidiyo, bacabanga kakhulu ngezinto ezibonwayo. Kodwa-ke, iqiniso liwukuthi amavidiyo awakona nje okubonwayo - umsindo udlala indima enkulu...
I-27th Ngo-Ephreli 2022
Izizathu ezi-5 zokuthi kungani i-YouTube kufanele ibe yi-akhawunti yakho yomphakathi eyinhloko
Kuze kube yiminyaka embalwa edlule, iningi labakhangisi belingeke licabange nge-YouTube ngendlela efanayo nokuthandwa kwe-Facebook, Instagram, ne-Twitter. Nokho, izikhathi ziye...
I-7th Ngo-Ephreli 2022
Ungamchaza Kanjani Omunye Umdali Ngokukhuthaza Kwabo Ngevidiyo Yakho?
I-YouTube igcwele abadali bokuqukethwe abakhuthazayo, futhi akukubi ukufaka okuqukethwe kwabanye kumavidiyo akho. Kodwa-ke, uma wenza, kubalulekile ukuthi uchaze...
Amasevisi we-YouTube Izinsizakalo ze-Twitter Izinsizakalo zeTwitch Amasevisi we-Pinterest Spotify Services Izinsiza ze-SoundCloud
Ukubukwa Subscribers Amazwana Ukuthandwa Bukela amahora Ukushumeka Amasheya
Ngokuziqhenya Sikhonza izinkulungwane zabasebenzisi be-YouTube
Bheka izibuyekezo zomsebenzisi weGoViral kanye nesipiliyoni sabo
Septhemba 30, 2020
by UCodey Novak
Izinkanyezi ezinhlanu iwebhusayithi! Iwebhusayithi isebenza kahle futhi zonke izinqubo ziphephile futhi zivikelekile ngempela. Uma ufuna insizakalo engakusiza ukuthola Ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube, ukuthandwa, ababhalisile namazwana usendaweni efanele. Ungayethemba i-GoViral 100%
Ngiyabonga kakhulu! Umsebenzi omuhle! Ngenxa yeGoViral ngihlala ngithola Ukubukwa kwamahhala kwe-YouTube. Ngifisa sengathi ngingathola iGoViral phambilini, kungenza impilo yami ibe lula kakhulu.
UMDLALO WESIBILI WESIBILI
by UMDLALO WESIBILI WESIBILI
Vele uthande le webhusayithi futhi uhlala…
Vele uyithande le webhusayithi futhi uzohlala uthola ababhalisile nokuthandwa nokubukwa sicela uqale ukusebenzisa le webhusayithi uzoyithanda le webhusayithi.
Joyina inethiwekhi yethu yamahhala futhi uqale ukuthola ukubukwa, ukuthandwa, ababhalisile namazwana namuhla!
Izinzuzo Zokwenza I-trailer Yesiteshi sakho se-YouTube
Amathiphu Okuvimbela Ukuthola Ukungathandwa kuvidiyo yakho ye-YouTube